भैंसीपालनले दिएको खुशी -
होण्डा बाइकको भटटट…. आवाज । त्यसमाथिको अधबैंसे पुरुष । पछाडि ठूलो झोला । त्यसभित्र ग्यालेन र जम्बो कोकका बोतल । ती सबै दूधले टनाटन भरिएका । बजारका डेरी र चिया पसल अगाडि बाइक रोक्दै बोतल र ग्यालेन रित्याउँदै अघि बढ्दै गरेको दृश्य जुम्ला खलंगावासीले निरन्तर देखिरहेका छन् । यो दृश्यका बाइक चालक हुन् गोठीचौर गाउँपालिकाका भैंसी पालक कृषक विष्णु धिताल ।
सोच भैंसी पाल्ने थियो तर, जुम्लामा व्यावसायिक रुपमा सम्भव छैन भन्ने मानिसहरुको सङ्ख्या कम थिएन । हुन पनि गोरस (दूध) गुजारामुखी मात्र भैरहेको सबैले देख्दै आएको हो । उनी भने मौका कुरेर बसेका थिए । एकदिन गोठीचौर गाउँपालिकामा गरिबी निवारण कोषका कर्मचारी समूह बनाउन आए । उनी समूहमा सदस्य बने । पछि उनलाई कोषले लगानी गर्ने भयो । बैंकले नपत्याउने विष्णु जस्ता सामान्य किसानहरुले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाए । कतिपय ठाउँमा गरिबी निवारण कोषको रकम दुरुपयोग भयो । विष्णुले यसलाई सुनौलो अवसरमा परिणत गरे ।
दशैंमा आशिर्वाद दिनेहरु ’एका एक्काइस भसय’ (एकबाट बढेर एक्काइस)’ भन्छन् । यो उक्ति विशेषगरी छोरोछोरी धेरै हुनुपर्छ भन्ने पुरानो मान्यतामा आधारित भए पनि विष्णुको भैंसीपालनमा यो अनिवार्य थियो । उनले मेहनत गरेर आशिर्वादमा सन्तान बढाउने उक्ति झैं एकबाट एक्काइस भैंसी बनाउने थियो । उनको २१ भैंसी नपुगे पनि १४ वटा पुगिसकेको छ ।
उनी भन्छन् – “विदेश गएर किन दःुख गर्ने ? जुनसुकै व्यवसाय अपनाए पनि जुम्लामा राम्रो पैसा कमाउने वातावरण देख्छु । जुम्लामा नहुने केही छैन । स्याउ, तरकारी, दूध, जडीबुटी सब छ ।”